Maraoka : Ambarao ny Hevitrao ho an’ny Fanovana, ao amin’ny Twitter · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Avrily 2011 13:59 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Italiano, русский, Ελληνικά, English
Ity lahatsoratra ity dia fanadihadiana manokana ataonay mikasika ny Hetsi-panoherana ao Maraoka taona 2011
Nitondra firehetam-po ho amin'ny fanovana ny lohataona Arabo. Satria efa manomboka mianjera ny rindrin'ny tahotra, mahatsiaro feno herim-po ny vahoaka ka nanomboka nandray an-tànana ny olany. Sehatra fiadian-kevitra ho an'ny daholobe ny valan-tserasera sosialy izao, izay nobodoin'ireo vato nasondrotry ny tany tao amin'ny fitondrana ho azy samirery hatry ny ela.
Ao Maroc, iray amin'ireo lohahevitra lehiben'ny fanovàna ny fanabeazana. Houda C. (@Houdac), vehivavy bilaogera miteny frantsay, no nanomboka ny adihevitra tao amin'ny Twitter, eo ambanin'ny tenifototra hoe #EducMa. Nanasa ireo olona izy hiresaka momba ny fanovàna iriana hotanterahina amin'ny fametrahana drafi-pampianarana amin'ny ankapobeny izay noheverina hanitsiana ny hita fa tsy nahomby hatrizay. Nanangona ireo valinteny voaray nandritra ny adihevitra ningainy i Houda C. azy ary nanoratra izany indray tao amin'ny bilaoginy [Fr]. Hoy izy manoratra:
Manohy mitaky ny fanovana lalam-panorenana ny tanora Maraokana, Rabat. Sary Zacarias Garcia, zon'ny mpamorona Demotix (20/03/2011).
Nivadika tsikelikely ho fikaonan-doha goavana hijerena vahaolana ny adihevitra, ka ny sasany namosaka hevitra maro isan-karazany raha nitambatra ho vondrona kely kosa ny hafa hiresaka lohahevitra manokana.
Ny fampianarana fiteny any an-tsekoly no tena resaka nibahana tamin'ny adihevitra. Ny Darija, tenim-paritra maraokana, dia tsy ampianarina ao an-dakilasy, ary tsy ankatoavina sy tsy ampiasana amin'ny fampianarana koa ny fiteny Amazigh, fitenin'ny maro amin'ny mponina berbera (mponina any Afrika avaratra) .
Nanamarika i Houda C. :
Nifanohitra tanteraka ireo hevitra mikasika ny fiteny ho enti-mampianatra any an-dakilasy, saingy niezaka mafy nandroso soso-kevitra isan-karazany ho toy ny vahaolana eken'ny be sy ny maro izahay :
- Ilaina ny manolotra safidy maro ho an'ny ankizy / mpianatra mikasika ny fiteny faharoa.
– Fampitovizana ny teny fampianarana avy any amin'ny sekoly fanabeazana fototra, ny sekoly ambaratonga faharoa ha hatrany amin'ny sekoly ambaratonga ambony. Ny fanaovana ho teny arabo ampahany fotsiny no hita fa anisan'ireo loharano niavian'ny tsy fahombiazana teo amin'ny rafi-pampianarana.
– Ny fanovana ny ohatra teo aloha mikasika ny teny frantsay. Fa maninona raha anglisy, ohatra, no atao ho fiteny faharoa enti-mampianatra?
Indreto teboka maromaro manamarika ny adihevitra.
@houdac: Anio hariva ao amin'ny #EducMa na inona na inona lohahevitra, andeha havoaka ny eritreritra momba izany! Mba tia karokaroka;)
@desperateSeeker: nahoana raha manontany an'i Finlandy isika mba hanome soso-kevitra #EducMa
@houdac: ok tweeps, ny lohahevitra androany hariva amin'ny #EducMa dia resaka momba ny fiteny sy ny fampianarana. Ahoana ny hevitrao? soso-kevitra?
@blafrancia: RT @Maghribi_1: @blafrancia بإختصار لقد خلقوا منا “متشردين لغويين”، و كما قال طارق رمضان في المغرب و الجزائر هناك الكتير من “مزدوجي الأمية”..ء #EducMa
raha tsorina dia nahatonga antsika ho “mpirenireny ara-piteny” ny rafitra nisy”, ary araka ny nolazain'i Tareq Ramadan indray andro, tao Maraoka sy tao Alzeria, maro ireo nijaly noho ny “tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra izy roa mitambatra”
Choum85: RT@Casafree: #EducMa tombontsoa ny fahaizana fomba fiteny anankiroa, nahoana raha misafidy ny teny arabo na ny teny frantsay? Afaka mahafehy tsara izany ireo tanorantsika.
@blafrancia: لا يجب وضع سوق الشغل خارج المساءلة.. لماذا يجب أن تكون لغة العمل هي الفرنسية؟ هذا يؤدي إلى إقصاء شريحة كبيرة من فرص العمل #EducMa
Tsy tokony ho hadinointsika ny mikasika ny tsenan'ny asa … Nahoana ny fiteny frantsay no fiteny ampiasaina eo amin'ny sehatry ny asa? Midika izany fa maro ireo tombontsoa very.
@Path_finder_: البحوث العلمية كلها بالإنجليزية و أغلب طلبة الماستر و الدكتوراه يعانون الأمَرّين بسبب ضعف مستواهم في الأنجليزية.#EducMa
Amin'ny teny anglisy avokoa ny fikarohana ara-tsiantifika ary mijaly noho ny tsy fahafehezany tsara ny teny anglisy ny ankamaroan'ny mpianatra taona fahaefatra sy taona fahadimy
@iMorocko: Manohitra ny Darija aho. Samy manana ny lazainy ny faritra tsirairay ka tsy misy ilàna izany (lahatsoratra, boky, sns.) #EducMa
@iMorocko: @HamzaDeb Sahady, tokony hampitoviana ny fiteny Amazighe. Fitaovana ny fiteny fa tsy tanjona #EducMa
@Hamza_: Tsy voatery ho tokony atao ny fiteny amazigh, fa tokony ho fiteny azo hisafidianana na tsia izany “EducMa
@houdac: ENY! :)) @othmane Na koa avelao hiverina an-tanindrazana ny diaspora maraokàna hampianatra teny Italiana (toe-tsaina Manome betsaka amin'ny Tamby kely) #EducMa
@iMorocko: Hevitra tsara izany! Ny Mandarin no fiteny ampiasaina amin'ny hoavy #EducMa Andeha hampandroso mialoha ny herin'ny Shina.
@rachraf: Ny sivilizasionan'izao tontolo izao dia nanomboka tamin'ny fanentanana amin'ny fandikàna, mankany amin'ny tenindrazana, 1/2#EducMa
@rachraf: Nandika boky maromaro amin'ny fiteny hafa i Israely izay efa nadikan'ny firenena Arabo koa 2/2#EducMa
@rachidnaim: Amin'ny fampiasana ny teny Arabo, dingana iray ihany no lalovana. Mifindra mivantana ny fahaizana. Amin'ny fiteny frantsay kosa mandalo dingana roa. #educma
@HamzaDeb: @dboutayeb #EducMa tsy midika ho fanariana ny teny frantsay ny fitiavan-tanindrazana sy ny fahafahana- maranitra kokoa ny vahoaka maraokàna noho izany IMHO
@mixour: Ny anglisy no fiteny faharoa manomboka eo amin'ny kilasy fanabeazana fototra#EducMa manokatra bebe kokoa ny fanantenana imho
@YasserMonkachi: @Hisham_G ilaina ny fanavaozana 2.0, mety afaka manampy betsaka amin'ny fampianarana ireo fiteny ny valan-tserasera sy ny wikis sasany #educma
@houdac: RT @mixour mampiasa ny fitenin-drazany ireo firenena manana fampianarana mandroso… Finlandy, Korée, Japana,….tokony hodinihana izany.#EducMa
@desperateSeeker: maninona raha manontany an'i Finlandy mba hanome soso-kevitra antsika #EducMa
Mbola tsy nifarana ny adihevitra ka lohahevitra vaovao hafa indray no nipoitra. Nanoratra i Houda C.:
Nisy ireo sasantsasany nanetry tena izay efa nilaza fa hanohy ny adihevitra amin'ny resadresaka manaraka, amin'ny twitter na hafa, ary indrindra manome ireo raki-kevitra rehetra mba ahazoana soso-kevitra mahomby ho amin'ny fanovana.